I-Szarvashegy Vitality Rest House - I-Airbnb
I-Szarvashegy Vitality Rest House
Szentendre, Pest, i-Hungary
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ágnes
U-Ágnes Ungumbungazi ovelele
Indlu inamakamelo akudala nesimanje anendawo yokudlela, indlu yokugezela kanye namasimu amakhulu. Elinye ithala livulelwa engadini eseduze, elinye ithala elikhulu elibheke izintaba kanye neBudapest ekude. Indlu iyatholakala njengendlu ehlukile yezivakashi zethu uma kwenzeka ukubhuka.
Kukhona nendawo yokuphila kahle ekhaya lamaholide, equkethe nebhavu elishisayo elingaphandle kanye ne-sauna yase-Finnish, izivakashi zethu ezingayisebenzisa ngaphandle kokuvinjelwa.
E-Szentendre ekhangayo, amakhilomitha angu-3 ukusuka enkabeni, egqumeni, silinde izivakashi zethu e-Szarvashegyi Éperő Pihenőház, lapho ngaphezu kokunethezeka, ukusondelana kwemvelo kuqeda konke okunye. Indlu ifinyeleleka kalula ngemoto. Kuwuhambo lwehora eli-1 ukusuka eLiszt Ferenc International Airport. Ngezithuthi zomphakathi e-Budapest - Szentendre imizuzu engu-38 nge-HÉV, bese ngelinye ibhasi lebanga elide imizuzu engu-15.
ubusuku obungu-7 e- Szentendre
I-Szentendre, idolobha labadwebi, itholakala endaweni ecebile kokubili amasiko nemvelo. Idolobha ngokwalo linikeza izinhlelo eziningi zamasiko nezinto ezikhangayo. Imigwaqo yakhona emincane, ama-steps alleys kanye nezindawo zokudlela nemigoqo lapha kuveza umoya okhethekile waseMedithera. Iseduze nezindawo ezikhangayo zasolwandle e-Budapest, i-Visegrád ne-Renaissance Royal Palace, i-Leányfalu enobhavu oshisayo. Izindawo eziseduze zokuqwala izintaba ze-Danube-Ipoly National Park, i-Nordic Walking Track noma i-Skanzen edume umhlaba wonke ingaba indawo enhle kakhulu eseduze, kodwa i-Hungaroring kanye ne-Sziget Festival nayo ingafinyelelwa kalula.
UÁgnes Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: MA19007496